Ekwentị nwere 5G nke anyị nwere ike ịzụta ugbu a na Spain | Gam akporosis
Kedu ekwentị 5G anyị nwere ike ịzụta taa?
5G etinyela nkenye zuru oke n'ọtụtụ mba na Europe. N'ihe banyere Spain, Vodafone na-ahụ maka ime ya, ihe mere n’izu ụka ole na ole gara aga. Ya mere na n'ọtụtụ obodo na mba ị nwere ike ịnụ ụtọ nkà na ụzụ ọhụrụ a. Ihe nkesa a putara na ekwuputara igwe ndi ozo di na ahia.
Na Mee igwe mbu 5G malitere iru Europe na ọkwa, kpọmkwem Switzerland. N'ime izu ndị a, ha abawanyewo na ahịa ndị ọzọ, dịka Spain. Na mba anyị anyị nwere ike ịzụta ọtụtụ dakọtara ekwentị na eze.
1 Huawei Nwunye 20 X 5G
Ekwentị kacha nso nso a iji rute Spain, dị na Fraịde a maka mmeghe nke ụlọ ahịa Huawei na Madrid. Nke a Huawei Mate 20 X 5G bụ nsụgharị kwekọrọ na njedebe dị elu nke akara ndị China gosipụtara n'afọ gara aga. Nkọwapụta ekwentị ka emebibeghị na nke a, enwere ntinye na netwọkụ ndị a n'ime ya, n'ihi ọnụnọ nke modụ Balong 5000.
Maka ugbu a, anyị nwere ike ịzụta ya n'efu, ebe o nwere ego nke euro 1.049, dị ka anyị mụworo. Ọ bụ ezie na Vodafone n'onwe ya egosiworị na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịzụta ya na ha. Ya mere na ndị ọrụ nwere ike ịnwe ọnụego dakọtara n'echiche a. Enweghị ụbọchị ọ bụla maka nke a n'oge a, mana ọ ga-abụ n'oge na-adịghị anya. Ebe ọ bụ na Vodafone na-achọkwa ịgbasa ọtụtụ ekwentị ya na 5G.
Koreandị Korea wepụtara ekwentị a na MWC 2019, nke mbu na katalọgụ ya nwere ndakọrịta 5G. Ihe nlere anyị nwere ike ịzụta na Spain na eze ruo izuụka ole na ole, dịka anyị siri gwa gị ụbọchị ya. Ngwaọrụ egosiri dị ka ezigbo nhọrọ igwu egwu, n'ihi ngwa ya nke na-enye gị ohere ịnweta ihu abụọ, maka ahụmịhe egwuregwu ka mma na ya.
N'okwu a, ndị nwere mmasị na LG V50 ThinQ ga-atụgharị ee ma ọ bụ ee na Vodafone. Anyị nwere ike ịhọrọ ekwentị ahụ na usoro nke ọnụego, nke na-eme ka ọnụ ahịa ya gbanwee nke ukwuu n'echiche ahụ, yana ọnụahịa dị n'etiti 899 na euro 1.150 dabere na ọnụego ahọrọ. Maka ugbu a, ịnweghị ike ịzụta n'efu, ọ bụ ezie na akara ahụ emeelarị ka o doo anya na ha ga-eme ya n'oge na-adịghị anya. Ma ọ dịghị ihe e kwuru banyere mgbe ọ ga-eme.
Ekwentị ekwuputala mbubreyo gara aga ma Emechara gosiputa ya na MWC 2019 na nhazi. Omeela izu ole na ole kemgbe anyị nwere ike zụta ekwentị Xiaomi a na Spain. Nhọrọ ọzọ dị mma na mpaghara ahịa a, nke akara ndị China jisiri ike bụrụ otu n'ime ndị mbụ nwere ekwentị dakọtara na ahịa. Ya mere, ọ bụ nnukwu ntọhapụ nke gị.
Na weebụsaịtị nke akara ndị China ọ na - apụta na ọnụahịa nke 599 euro, ebe anyị nwere ike ịzụta ya n'efu. Ọ bụ ezie na enwere ike ịzụta ya site na Vodafone, onye ọrụ nke na-elekọta 5G ruo Spain. N'okwu a, dabere na ọnụego a ga-ahọrọ, ọnụahịa nwere ike ịdị iche.
Otu n'ime ekwentị 5G kachasị atụ anya na ahịa, nke anyị nwere ike ịzụta ugbua na Vodafone. Galaxy S10 5G bụ onye kacha ere ahịa na South Korea,, ebe ọ pụtaworo dị ka ihe atụ kachasị ere ahịa. N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịzụta ya ugbu a na onye ọrụ, nke bụ otu n'ime ekwentị ọtụtụ ndị ọrụ na-atụ anya.
Dabere na ọnụego ahọrọ, ọnụahịa ekwentị na-agbanwe, n'etiti euro 1.079 na 1.296. N'ihi ya, ọ ga-adabere na ihe ọ bụla onye ọrụ na-aga ịhọrọ na nke a. Ekwentị akpọrọ ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma, ya mere ọ ga-abụrịrị nhọrọ a ma ama n'etiti ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Kedu ekwentị 5G anyị nwere ike ịzụta taa?
Fuchsia OS: Ihe anyị ma ugbu a
EMUI 9.1 na-ebupụta maka Huawei P20 na P20 Pro